I-Boldenone powder (846-48-0) hpllc≥98% | AASraw
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Boldenone powder Series / Boldenone powder
SKU: 846-48-0. iindidi: I-Boldenone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Boldenone powder (846-48-0), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Boldenone powder , eyaziwa nangokuthi Δ1-testosterone, yinto yokwenza i-anabolic-androgenic steroid yokwenziwa (AAS) kunye ne-1 (2) -e-analogrogenated analogue ye testosterone. I-Boldenone ngokwayo ayizange idayiswe; njengeziyobisi zonyango, lisetyenziswe njenge-boldenone undecylenate, i-ester undecylenate.
Boldenone powder ividiyo
I-Raw Boldenone powder ezisisiseko
I-molecular Formula: C19H26O2
Isisindo somzimba: 286.41
Ukusetyenziswa kwe-Boldenone powder kwi-cycle ye-steroids
I-Boldenone nayo iyaziwa njengegama lokuthengisa i-Equiposie, iGanabol, i-Equigan kunye ne-Ultragn.
Ukusetyenziswa kwe-Boldenone powder
Akukho ngaphantsi kwe-400-600mg ngeveki, musa ukwandisa umyinge ngaphezu kwe-600mg, kuba ayiyi kuba neyongezelelweyo inzuzo. Ubude bomjikelezo oqhelekileyo yi-10-12weeks.
Isilumkiso kwi-Raw Boldenone powder
Abadlali bezemidlalo mabayenze yonke imihla ukuze bahlale bezinzile. Ukuba akakwazi ukwenza oku, makenze oku ngaphantsi kwesinye ngeveki.
Kwindawo enye yokuxhatshazwa, ukuba i-injection high volume is made often, i-abscess oil may form. Yaye iya kutshabalalisa ngokwayo kodwa kwimeko embi kunokuba idinga ukuhlinzwa. Ngoko ke, umsebenzisi kufuneka anakekele iisayithi zokuxhatshazwa. Oku kuyinyaniso kwezinye i-steroids ezininzi.
I-Raw Boldenone powder Marketing
Indlela yokuthenga i-Boldenone powder kwi-AASraw